Mystic Hammer waxaa loogu ciyaaraa sidii difaac munaarad ah dhirta vs Zombies | Androidsis
Mystic Hammer waa ciyaar cusub oo loogu talagalay Android sida difaaca munaaradda Dhirta iyo Zombies, inkasta oo leh astaamo dhexdhexaad ah iyo RPG. Taasi waa, waxaan xitaa awood u yeelan doonnaa inaan horumarino cutubyadeena dagaalka, taas oo siineysa qodob aad u qaas ah.
Laakiin waxaan marka hore ka digeynaa, taas oo aan ku jirin isbaanish, sidaa darteed waa inaad jiitaa qaamuuska ama Google Lens si aad u qaadatid shaashadda shaashadda oo aad u fahanto sida unugyada aasaasiga ahi u shaqeeyaan. In kasta oo ay run tahay inay iska shabahaan qaar badan oo ka mid ah Dhirta iyo Zombies. U tag.
1 Qaybahaaga dhig meesha saxda ah
2 Ku ciyaar 50 heerar iyo 120 hirar Mystic Hammer
3 Beddel xiiso leh
Qaybahaaga dhig meesha saxda ah
Mystic Hammer waa ciyaar bilaash ah, in kasta oo ay adag tahay in dib u eegis lagu sameeyo, waan helnay xiiso leh oo ku filan si ay u noqoto beddel la aqbali karo haddii ay dhacdo inaad seegto ciyaar sida Ciyaaraha EA ah.
Waan bilaabi doonnaa ku ciyaar heerarka aad na barinayso aasaasiga iyo awoodaha ugu waaweyn ee unugyadaas oo aan fureyno. Waxaan ku bilaabaynaa qaansoley iyo cutub kale si aan u soo saarno qadaadiic noo oggolaan doonta inaan dhigno cutubyo dheeri ah safafkaas difaaca.
Waqtiga aan diyaarka nahay, ayaa cadaawayaashu waxay bilaabi doonaan inay ka soo muuqdaan dhinaca midig si toos ah ugu aadno qalcaddeenna haddii aynaan iska ilaalin. Si aad u badan, waa inaan dhignaa laba ama saddex qaansoley si ay u baabi'iyaan iyaga oo aan dhibaato badan qabin.
Ku ciyaar 50 heerar iyo 120 hirar Mystic Hammer
Farqiga ugu weyn ee aan soo sheegnay ayaa ah in Mystic Hammer waxaan awoodi doonnaa inaan horumarino xirfadaha cutubyada dagaalka. Maaddaama cadowyo badan la tirtiro, waayo-aragnimadoodu way sii kordheysaa illaa badhankaas yar uu ka muuqdo heerka kor u kacaya ee ah inaan cadaadino.
Waa qeybta RPG ee taabaneysa Mystic Hammer si aan uga shaqeyn doonno wax ka badan uun dhigida cutubyada safafkaas. Soo dhaafay labada heer ee hore ayaa furi doona safafka intiisa kale si xisbigii hirarku u bilaabmo.
Waxay noqon doonaan a wadar ahaan 120 hirar iyo 50 heer taas oo aan dhameystiri karno hadii aan ciyaarta dhameysano. Way cadahay inaan wajaheyno ciyaar indie ah oo ay jiraan waxyaabo badan oo lagu sifeynayo, laakiin taasi guud ahaan ma xuma.
Beddel xiiso leh
Sannadahaas ka dib oo aan ku haysannay waxyaabo kale oo lagu beddelayo Dhirta iyo Zombies, marka laga reebo soo-dejinta ay soo saartay Ciyaaraha EA, Mystic Hammer waa difaac munaarad ah oo marka hore niyad jabin kara, laakiin haddii aan wax yar ka sii qodno farsamadeeda, waa wax aad u xiiso badan.
Muuqaal ahaan waa wax fudud, iyo waad badbaadin kartaa qaabeynta astaamahaaga, laakiin wax kale oo yar. Arrinta xiisaha leh ee arrintan ku saabsan difaaca munaaraddu waa heerka mukhaadaraadka taasi waxay sababi kartaa mowjadahaas iyo cadawga badan ee shaashadda si aan u helno cutubyadeenna dagaalka.
Mystic Hammer waa ciyaar ka madhan Play Store si aan u noqono wax ka badan aqbalid lacala haddiiba aan seegno noocan ah ciyaarta.
Mid xun iyo mid xun toona, laakiin beddel u ah difaaca munaaradda sanado kahor sida Dhirta iyo Zombies.
Ku difaac naftaada tirada badan ee cadowga shaashadda
Noocyada kala duwan ee dagaalka
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Mystic Hammer waa difaac munaarad cusub a la Dhirta vs Zombies